About Us - Shanghai SOG Pumps Co., Ltd
Shanghai SOG Pumps Co., Ltd. rakaumbwa muna 2005. Iri rwakazvitsaurira kugadzira yepamusoro pombi uye vaiita pakupa "yepamusoro, mukuru-kushanda, simba-okuponesa, uye zvakatipoteredza ushamwari" pumps.It Ndiyo nzira itsva emakambani vaitungamirira China panguva muminda Stainless simbi Centrifugal Pombi uye submersible tsvina pombi.
SOG kuti kutungamirira chigadzirwa ndiye CDL & CDLF akatevedzana kutwasuka Stainless simbi multistage Centrifugal pombi, CHL & CHLF akatevedzana chinjikira Stainless simbi multistage Centrifugal pombi, CQB & ZCQ akatevedzana Stainless simbi rinobva pombi, ih & CI & ZA akatevedzana Stainless simbi namakemikari pombi, QBY akatevedzana diaphragm pombi, WQP akatevedzana Stainless simbi Submersible tsvina pombi, WQGS dzino rinorema-basa nokuveza tsvina pombi, SGL & SGW akatevedzana Mapaipi Centrifugal Pombi uye pombi maitiro uye kudzora system.which akanga zvinowanzoshandiswa dzinogarwa, yezvokutengeserana uye mumaindasitiri mvura zvifambiso. Industrial zvinwiwa kurapwa, dziviriro kwezvakatipoteredza, mvura uye tsvina mvura kurapwa nezvimwe minda.
" SOG akarega mvura iyerere zvikuru " Kuti vawane yepamusoro pombi kuti nyanzvi, SOG anotungamirira mitemo dzakawanda, integrates yepamusoro zvekushandisa pfuma, regai kuramba kwezvinhu kuchinja uye zvakagadzirwa kuvandudza pombi kuti muzvigadzirwa chechetere. " Quality rinobva basa, kuvimbika anosika kukosha, uye ruremekedzo ndiye takunda takunda ramangwana " ndicho chinoumba kukosha SOG. Provid mutengi pamwe mutengo-vanobudirira pombi nerubatsiro Ibasa chikuru kwatiri.
Kuperera nheyo zvebhizimisi, R espect ndiyo hwaro pamwe zvinowirirana. Tinoremekedza neimwe nezvido uye zvinodiwa, tsvaka bvumirana vachivaka kusawirirana, uye vawane takunda zvisamumirira zvabuda pakati vatengi, vashandi, uye vamwe kukura. saka kuti kuvaka kutsigira yemakambani ukoshi cheni.
Kutarisira ramangwana, SOG acharamba kukudziridza National indasitiri. Nomudzimu vabudirire zvakaratidzwa " Vaka airemekedzwa zvebhizimisi ". SOG iri vakazvipira kuvandudza uye Utilisation kuti mvura pfuma uye kwevanhu ezvinhu ...
mhiri kwemakungwa Team